♥ MixMaxMyanmar » မြန်မာရောကြော်
ဦးကျော်ဇော၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ »
Blog လုပ်ချင်သူများအတွက် »
E-Book Webs »
မြန်မာ ဘလော့ခ်ဂါ လမ်းညွှန်
Zawgyi-One Unicode for XP
Zawgyi-One Unicode for Vista
Burma (သို့) ဖာမ
ထိုင်းလူမျိုးက မြန်မာတယောက်ကို ဘာလူမျိုးလဲ မေးရင် Myanmarပါလို့ ပြောရင် ပညာတတ် လူနည်းစု(တကယ့်နည်းနည်း) ၁%လောက်ဘဲသိတယ်။ မြန်မာကို ဖာမလို့ ပြောရင်တော့ ၁၀၀% သိကြတယ်။ Burmaကို သူတို့နားထဲမှာ ကြားတဲ့အသံထွက်က ဖာမ ကြားနေလို့ပါ။ ဒါကို ယိုးဒယား ရောက်ဖူးတဲ့ လူတိုင်းနီးပါ သိကြမှာပါ။
Thailand contains more than 30 ethnic groups varying in history, language, religion, appearance, and patterns of livelihood.
သူတို့မှာလည်း လူမျိုးခွဲတွေ များတာဘဲ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့လူမျိုးအားလုံးက ထိုင်းလူမျိုး (ကွန်းထိုင်း)ပါလို့ ဂုဏ်ယူစွာ ခံယူပြောတတ်ကြတယ်။ ထိုင်းလူမျိုးကြီးတွေက စည်းရုံးရေး ကောင်းကြတယ်လို့ ပြောရမှာဘဲ။
မြန်မာပြည်မှာ ကတော့ ဗမာတွေက လူမျိုးစု ပေါင်းစုံကို အုပ်ချုပ်လာတာ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းကပါ၊ ယခုအချိန်ထိ ဗမာစကား၊ ဗမာစာ မတတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေအများကြီး ရှိနေသလို၊ နိုင်ငံခြားရောက်လို့ မင်းတို့ ဘာလူမျိုးလဲလို့ အခြားနိုင်ငံသား တွေမေးလာရင် လည်း မြန်မာလူမျိုးပါလို့ တိုင်းရင်းသားအာလုံးနည်းပါးက ပြောဖို့ဝန်လေးပါ တယ်။ မြန်မာအ စား သူ့တို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကိုဘဲ ပြောတာများတယ်။ အဲဒီလောက် မြန်မာကို ချစ်တာ။
ဒါတွေက ဘာကိုပြလဲဆိုရင် ဗမာ အစိုးရဘဲပြောပြော၊ စစ် အစိုးရဘဲဆိုဆို တိုင်းရင်းသား တွေကို စည်းရုံးနိုင်မှုညံ့ခဲ့တာလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ် ရတာကိုဘဲ လူစဉ်မမီ တယ်လို့ တိုင်းရင်းသား အများစုက ခံစားနေရတာဖြစ်နေလို့ပေါ့။ ဗမာက ဗမာလူမျိုးကိုမချစ်တာ တိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာကိုယုံဖို့ ကတော့ မနည်းစည်းရုံး ရလိမ့် မယ်လို့ ကျနော့်ရဲ့ ၀ါးလုံးခေါင်ထဲက အမြင်ကို ပြောကြည့်တာပါ။
Technorati Tags:Myanmar Burma Ethnic groups
Lu4 August 2009 at 12:40ဟုတ်တယ် ဗမာလူမျိုး ဆို၇င်အထင်သေးပြီးသားဘဲတော်တော်များများက အကျင်.မှမကောင်းတာ စိတ်ဓာတ်ကလည်းဖျက်ထားလို.ပျက်နေပြီလေ ဟုတ်မလား ကိုယ်.လူ။ReplyDeleteAnonymous24 May 2012 at 16:03ဟုတ်တယ်လေ ဗမာ ဆိုတာ ကျန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၇ှိတဲံ လူမျိုးတွေ၇ဲ့ နေ၀င်ချိန်ကျမှ ပေါ်လာတဲ့ လူမျိုးလေ။ ဘာသာေ၇းအ၇ဆို၇င် ဘု၇ားကို မမြင်ဖူးတဲ့ လူမျိုးပေါ့ ။ အဲလို လူမျိုးကို ဘယ်သူက ငါဗမာဟဲ့ လို့ ကြွေးကြော်နေမှာလဲ။ မျိုးချစ်စိတ်မှာလဲ တခြားတိုင်း၇င်းသားတွေထက် အားနည်းတယ်ထင်တာဘဲ။ReplyDeleteAnonymous24 May 2012 at 16:04ဟုတ်တယ်လေ ဗမာ ဆိုတာ ကျန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၇ှိတဲံ လူမျိုးတွေ၇ဲ့ နေ၀င်ချိန်ကျမှ ပေါ်လာတဲ့ လူမျိုးလေ။ ဘာသာေ၇းအ၇ဆို၇င် ဘု၇ားကို မမြင်ဖူးတဲ့ လူမျိုးပေါ့ ။ အဲလို လူမျိုးကို ဘယ်သူက ငါဗမာဟဲ့ လို့ ကြွေးကြော်နေမှာလဲ။ မျိုးချစ်စိတ်မှာလဲ တခြားတိုင်း၇င်းသားတွေထက် အားနည်းတယ်ထင်တာဘဲ။ReplyDeletekhine lin27 July 2014 at 14:37ကောင်မလေးများ အန်တီလေးများ အလန်းဇယားလေးတွေလိင်အကြောင်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် သဘောရှိရင် စိတ်ကြိုက်လိုးပေးမယ်..............လက်ခံပေးပါ...တယ်စောက်ပတ်ယားနေတဲ့အမတွေ ကောင်မလေးတွေ အန်တီတွေဇယားတွေအက်လိုက်ပါလီးကြီးကြီးနဲ လိုးပေးမယ် ရန်ကုန်က ကောင်မလေးများအန်တီလေးများ အလန်းဇယားလေးတွေ လိင်အကြောင်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် သဘောရှိရင်စိတ်ကြိုက် လိုးပေးမယ်..............လိုးချင် တယ်စောက်ပတ်ယားနေတဲ့အမတွေကောင်မလေးတွေ အန်တီတွေ ဇယားတွေအက်လိုက်ပါလီးကြီးကြီးနဲ လိုးပေးမယ်sexgirlfriend11@gmail.com.sexgirlfriendxxx@gmail.comလိုးချင် တယ်စောက်ပတ်ယားနေတဲ့အမတွေ ကောင်မလေးတွေ အန်တီတွေဇယားတွေအက်လိုက်ပါလီးကြီးကြီးနဲ လိုးပေးမယ် ကောင်မလေးများ အန်တီလေးများအလန်းဇယားလေးတွေ လိင်အကြောင်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် သဘောရှိရင် စိတ်ကြိုက်လိုးပေးမယ်..............လက်ခံပေးပါReplyDeleteAdd commentLoad more...
mixmaxmyanmar. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com